ပြတင်းပေါက် ၁၀ ခုတွင်မျက်နှာပြင်နှစ်ခုကိုအသုံးပြုနည်း - Easy Multi Display
ဒီဆောင်းပါးကသင့်ကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ် ပြတင်းပေါက် ၁၀ ခုမှာဖန်သားပြင်နှစ်ခုကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။ သင်၏ဖန်သားပြင်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆော့ဝဲလ်နှင့်အခြားပြwithနာများရှိနေသေးလျှင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ် ခေါင်းစဉ်များလွတ်လပ်စွာခံစားရသည် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်။
ပထမ ဦး စွာသင်၏စနစ်၏အင်္ဂါရပ်များအကြောင်းကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တစ်ပြိုင်နက်တည်းသင်ပြလိုသည့်ဖန်သားပြင်အရေအတွက်ပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ ဖန်သားပြင်တစ်ခုသည်ဖန်သားပြင်ခြောက်ခုနှင့်တူညီသည်။ ဒါကြောင့် windows2မှာဖန်သားပြင် ၂ ခုကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ setup လုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။
ဤဖွဲ့စည်းမှုသည်မျက်နှာပြင်တစ်ခုမှသုံးခုအထိအလုပ်လုပ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ အကယ်၍ သင်ဖန်သားပြင်သုံးခုထက်ပိုပြီးဖော်ပြလိုပါကသင်၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်။
Easy Multi Display ကိုသုံးရန်စနစ်လိုအပ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပိုမိုသိလိုပါကဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ။ "စနစ်လိုအပ်ချက်များ".
သင်၏ configuration ကိုကိုင်တွယ်ရန်လုံလောက်မှုရှိမရှိသင်သိပြီးတာနဲ့ လွယ်ကူစွာခင်းကျင်းပြသ ပြီးလျှင်သင်၏မျက်နှာပြင်နှစ်ခုကိုလွယ်ကူစွာမြင်တွေ့နိုင်သည့်မျက်နှာပြင်နှစ်ခုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ဆော့ဝဲ၏ကြိုဆိုမျက်နှာပြင်တွင် "2 displays" option ကိုရွေးချယ်ရုံသာဖြစ်သည်။
စကားမစပ်၊ နောက်မျက်နှာပြင်အရေအတွက်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီး၊ သင်၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်အဆင်သင့်ဖြစ်မဖြစ်စစ်ဆေးရန်သာလိုအပ်သည်။
Easy Multi Display ရှိမျက်နှာပြင်အရေအတွက်
သင်၏ medias ကိုပြသရန်သင်ယခင်ကသင်အသုံးပြုလိုသော screen အရေအတွက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ယခုသင်ဇုန်များကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ Easy Multi Display တွင်၊ တစ်ပြိုင်နက်တည်းအားဖြင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖော်ပြရန်ဇုန် ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ သို့ခွဲခြားနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အနည်းဆုံး system လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပါကသင်၌ပြneedနာမရှိပါလိမ့်မည်။
Easy Multi Display ရှိဇုန်အရေအတွက်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ medias ကိုပြသရန်အတွက်, သင် ... medias ကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ Easy Multi DIsplay ဖြင့်ရုပ်ပုံများ (JPG, PNG, GIF ... )၊ ဗီဒီယိုများ (MP4, AVI, MOV ... ), PowerPoint နှင့် Google Slides ဖိုင်များသို့မဟုတ် Microsoft Words သို့မဟုတ် Mircrosoft Excel ကဲ့သို့သောဆော့ဝဲလ်များစွာကိုပြသနိုင်သည်။ ! ဆော့ဗ်ဝဲကိုဘယ်လိုပြရမလဲဆိုတာပိုသိချင်ရင်ဒီဆောင်းပါးကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်”သင်၏ PowerPoint ဖိုင်များကိုမည်သို့ပြရမည်နည်း"သို့မဟုတ်"ကျွန်ုပ်၏ Excel ဖိုင်များကိုဘယ်လိုပြမလဲဤဆောင်းပါးနှစ်ခုသည် Microsoft ဆော့ဖ်ဝဲနှစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ဆော့ (ဖ်) ဝဲအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
အောက်ပါဥပမာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမမျက်နှာပြင်ကိုဇုန် ၄ ခုခွဲရန်ရွေးချယ်ပြီးဝက်ဘ်ဆိုက် ၄ ခု (၁ ဇုန်၊ ၀ ဘ်ဆိုဒ် ၁ ခု) ကိုပြရန်ရွေးချယ်သည်။ သင်၏မျက်နှာပြင်အားလုံးအတွက်ဒီကိုင်တွယ်မှုကိုသင်ထပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်သင်ပြသနိုင်ပါလိမ့်မည်! လွယ်တယ်မဟုတ်လား ငါတို့ရဲ့ software ကိုသင်ကြိုက်လျှင်သင်လုပ်နိုင်သည် အဲဒါကိုအခမဲ့စမ်းကြည့်ပါ!
လွယ်ကူသော Multi Multi Display